Jobho 38 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
38 Zvino Jehovha akapindura Jobho ari mudutu,+ akati: 2 “Ndianiko uyu ari kudzikatidza zvakarongwaNemashoko asina zivo?+ 3 Ndapota, zvisunge muchiuno somurume,Uye rega ndikubvunze, iwe undiudze.+ 4 Wakanga uri kupi pandakavaka nheyo yenyika?+Ndiudze, kana uchinzwisisa. 5 Ndiani akatara kukura kwayo, kana uchizivaKana kuti ndiani akatambanudza tambo yokuyeresa pamusoro payo? 6 Ko zvigadziko+ zvayo zvakadzikwa pai,Kana kuti ndiani akamisa dombo rayo repakona? 7 Nyeredzi dzemangwanani+ padzakashevedzera nomufaro pamwe chete,Uye vanakomana vose vaMwari+ pavakatanga kushevedzera vachirumbidza? 8 Ndiani akadzivira gungwa nemasuo,+Iro rakabuda sezvarinoita parinoputika richibuda muchibereko; 9 Pandakaisa gore kuti rive nguo yaroUye zarima kuti rive jira rokuriputirisa, 10 Ndikariisira murau wanguNokuisa muzariro nemasuo,+ 11 Ndikati, ‘Ungasvika apa, asi haungapfuuri;+Uye mafungu ako makuru anogumira apa’?+ 12 Wakamborayira mangwanani kubvira pakatanga mazuva ako here?+Ndiwe wakaita kuti mambakwedza azive nzvimbo yawo here, 13 Kuti abate migumo yenyika,Kuti vakaipa vazunzwe vachibva pairi?+ 14 Inozvishandura sevhu+ riri pasi pechisimbiso,Uye zvinhu zvinobuda sokunge zvakapfekedzwa. 15 Vakaipa vanovharirwa chiedza chavo,+Uye ruoko runozvikwidziridza runotyoka.+ 16 Wakasvika panonyuka mvura yegungwa here,Kana kuti wakambofamba-famba+ uchitsvaka mvura yakadzika+ here? 17 Wakambovhurirwa magedhi orufu+ here,Kana kuti ungaona magedhi ezarima+ here? 18 Wakambonzwisisa nezvenzvimbo dzakafara dzenyika here?+Taura, kana wava kuzviziva zvose. 19 Nzira inoenda kunogara chiedza iri kupi?+Kana riri rima, nzvimbo yaro iri kupi? 20 Kuti uende nazvo kumuganhu wazvoUye kuti unzwisise migwagwa inoenda kumba kwazvo? 21 Wava kuzviziva nokuti wakaberekwa panguva iyoyo,+Uye nokuti mazuva ako mazhinji here? 22 Wakambopinda mumatura echando,+Kana kuti unoona matura echimvuramabwe,+ 23 Zvandakachengetera nguva yokutambudzika,Nokuda kwezuva rokurwa nerehondo here?+ 24 Zvino nzira inopararira nayo chiedza iri kupi,Neinopararira nayo mhepo yokumabvazuva+ panyika? 25 Ndianiko akagadzirira mafashamo pokuyerera napoUye gore redutu rinotinhira nzira yaro,+ 26 Kuti mvura inaye panyika isina munhu,+Parenje risina munhu wepanyika, 27 Kuti nzvimbo dzakaparadzwa nemadutu pamwe chete nematongo zvigutsweUye kuita kuti uswa humere?+ 28 Ko mvura inonaya ina baba here,+Kana kuti ndiani akabereka madonhwe edova?+ 29 Mvura yakaita chando inobuda mudumbu raani,Ndiani akabereka mazaya echando+ chokudenga? 30 Mvura inoramba yakavanda sokunge kuti iri pasi pedombo,Uye pamusoro pemvura yakadzika panoumbana.+ 31 Ungasunga zvakasimba zvisungo zveboka renyeredzi reKima here,Kana kuti ungasunungura tambo dzeboka renyeredzi reKesiri here?+ 32 Ungabudisa boka renyeredzi reMazaroti panguva yaro yakatarwa here?Uye ungafambisa boka renyeredzi reAshi pamwe chete nevanakomana varo here? 33 Wava kuziva mirau yokumatenga here,+Kana kuti ungaisa simba rawo panyika here? 34 Ungashevedzera zvinonzwika kumakore,Zvokuti mvura zhinji ingakufukidza here?+ 35 Ungatuma mheni kuti dziendeDzoti kwauri, ‘Tiri pano!’ here? 36 Ndiani akaisa uchenjeri+ mumakore akaturikidzana,Kana kuti ndiani akapa chinhu chinoshamisa chokudenga kunzwisisa?+ 37 Ndiani anganyatsoverenga makore nouchenjeri,Kana kuti ndiani angadurura zvirongo zvemvura zvokudenga,+ 38 Guruva parinodururuka sezvinoita simbi yakanyungudutswa,Uye mavhinga enyika paanonamatirana? 39 Ungavhimira shumba mhukaUye ungagutsa nhomba huru yevana veshumba,+ 40 Pavanoti hwatata munzvimbo dzokuvanda,+Kana kuti pavanoramba vari munzvimbo dzakavandika dzokuti vavandire here? 41 Ndiani anogadzirira gunguo zvokudya+ zvaro,Vana varo pavanochemera kubatsirwa naMwari,Pavanoramba vachidzungaira nokuti hapana chokudya?